भाइरल बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै, स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव – इन्सेक
भाइरल बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै, स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव
जाजरकोट ०७४ भदौ १६ गते
जिल्लाका अधिकांश दुर्गम गाउँ तथा बजार क्षेत्रमा भाइरलका बिरामीको सङ्या दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन् । यहाँका स्थानीयहरू भाइरलबाट ग्रस्त भएकाले पानी दिनेसम्म पनि सारसुहाउँदै नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
भाइरलका कारण गाउँमा निकै समस्या भइरहेको तर स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र औषधि नहुँदा उपचारमा समेत समस्या परेको स्थानीयबासी गुनासो गर्छन ।
गाउँगाउँमा फैलिएको भाइरलका कारण बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाउने हो भने यो भाइरल महामारीको रूपमा फैलने र विगतमा झैँ धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्ने आशङ्का गर्छन् त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावल । धेरैको घरमा बिरामी परेकै कारण बिरामीलाई पानी उमालेर दिनेसम्म कोही नभएको प्रमुख रावलले बताए ।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल बिरामीको उपचारमा लाग्न र औषधि अभाव हुन नदिनसमेत निर्देशन गरिएको उनले बताए । साथै गाउँमा फैलिएको भाइरलका बारेमा जिल्ला अस्पतालमा समेत जानकारी गराइएको र भाइरललाई महामारीको रूपमा फैलन नदिन सम्पुर्ण तयारीमा लाग्न अनुरोध समेत गरिएको बताए ।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा केही दिन यता दैनिक ५० देखि ७० जनासम्म भाइरलका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको इलाका स्वास्थ्य चौकी दल्लीले जनाएको छ ।
वर्षातका समयमा जथाभावी फोहोर ठाउँको पानी पिउँदा र खानासमेत राम्रोसँग नपकाएर खाँदा यस्तो समस्या आएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । भाइरलका बिरामीको सङ्ख्या बढेर स्वास्थ्य संस्थामा भिड लाग्न थालेपछि डाँडागाउँ कैनास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि सकिएको स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् ।
३/४ दिन देखि सलाइन् पानी सकिएको भएपनि जिल्लामा जाने अवस्था नभएकाले बिरामीलाई केही दिन यता सलाइन् पानी लगाउन नपाइएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले बताए । केही बिरामीका आफन्तले आफैँले मेडिकलबाट झिकाएर ल्याएकालाई मात्र सलाइन् लगाइदिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
बारेकोट गाउँपालिकाका सबैजसो वडाका मानिसहरू भाइरलबाट प्रभावित बनेका छन् । बारेकोट गाउँपालिकामा भाइरलका कारण दुई जना बालकको ज्यान गइसकेको बताइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरू अपायक पर्ने र टाढा रहेकाले पनि उपचारमा समस्या परेको बारेकोट जिरीका स्थानीय पत्रकार वीरबहादुर गिरीले बताए ।
रग्दा र भगवतीका दुर्गम गाउँमा भाइरलकै प्रकोपले धेरै मानिसहरू घरघरमा थला परेर बसिरहेको स्थानीयबासी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी जाजरकोटका सचिवालय सदस्य भिमबहादुर मल्लले बताए । मल्लका अनुसार कुनै घर त्यस्तो छैन जहाँ बिरामी नभएको होस् । 'कसलाई उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने कसलाई नलैजाने ? स्वास्थ्य संस्था टाढा छ । स्थानीय मेडिकलहरूमा औषधि महङ्गोमा विक्री गरिरहेका छन् । भाइरलबाट बढी जसो बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित बनेका छन् ।'-मल्लले भने ।
स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचारमा समस्या आएको छ । डाँडागाउँ स्वास्थ्य चौकीमा विगत ८ महिनादेखि ६ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली छ । त्यस्तै भगवती स्वास्थ्य चौकी, नायकवाडा स्वास्थ्य चौकीलगायत धेरै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नभएको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटले जनाएको छ ।
'५० शैयाको जिल्ला अस्पतालमा समेत चिकित्सकको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन नसकेकोमा गाउँमा त झन् के हुन्थ्यो?'-नागरिक समाजका अध्यक्ष केशबजङ्ग शाहले बताए । शाहले भने-'सबैलाई राजनीति लागेको छ पार्टी कार्यालय धाएपछि सबै काम बन्ने भएपछि किन गाउँगाउँ डुल्ने अनि दुख गर्ने भए ?'
सदरमुकाम खलङ्गामा समेत भाइरल फैलिएको छ । विद्यालयमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरू समेत बिरामी हुँदै विद्यालयबाट अस्पताल गएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको शिक्षक राजेन्द्र कार्की बताउँछन् ।
स्वस्थ्य खाना र शुद्घ पानीमा ध्यान नदिँदा धेरै समस्या आएको जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख चाँदनी जैसवालले बताइन् ।